IsiCwangciso soLawulo oluNgxamisekileyo (GEMAS) khetha i-gvSIG-Geofumadas
NgoNovemba, 2011 Iiphotography, GvSIG, UkuCwangciswa kweziThili
Sazisiwe ngale nto yokusetyenziswa kwezicelo ze-gvSIG kwiinkqubo ezilungiselelwe kulawulo olungxamisekileyo, ngoko ke siyisasaza, sikholelwa ukuba inokuba luncedo kwabaninzi.
Iphondo laseMendoza leRiphabhlikhi yaseArgentina, ngumhlaba obuthathaka ngenxa yemeko yendawo yokuhlala kwaye ichaphazeleka rhoqo zizinto ezahlukileyo zendalo: izikhukula, imvula, umoya, isichotho, inyikima, intaba-mlilo, imililo yehlathi kwaye ibaleka nomngcipheko: , njl.
Ngokunjalo, namanye amazwe emhlabeni ahlupheka ngenxa yobuthathaka obunje ngeenkanyamba, izikhukula, itsunami okanye ezinye izinto ezibangela ukonakala ebantwini nakwimpahla yabo.
Izinto zendalo zijika zibe ziintlekele emva komsitho. Oku kunokuncitshiswa ngezicwangciso ezikhoyo ngoku zokuqulela okungehla.
Kuwo wonke umhlaba, uPhuhliso loLuntu kufuneka lucuthe umngcipheko, kubemi balo, kwiiasethi nakutyalo-mali lwabo. Amazwe ayasebenzisana kunye neentlobo ezahlukeneyo zemidiya, xa umntu esiva ubunzima kwiziphumo zolu hlobo.
IYunivesithi yeSizwe yeCuyo (UNCUYO), kunye neZiko laMazwe ngaMazwe eleeSayensi zoMhlaba (i-ICES), ilungiselela kwaye isebenzise isicwangciso soLawulo lweNgxamiseko ngohlalutyo lweSatellite (i-GEMAS), elisebenzisa ubuchwepheshe obutshanje ukunciphisa iRISKS NGOKUFANELEKILEYO NESIPHATHO, obambele kwinqanaba likaxakeka, likaxakeka nangemva kwexesha likaxakeka.
Le projekthi namaqela ngokudibeneyo kwezenzululwazi kunye nezobuchwepheshe ezinxulumene nesi sihloko, ezinye zazo zikhankanyiwe:
IKhomishini yeSizwe yeZinto eziSebenza kwiRiphabhlikhi yaseArgentina inyanzelisa ukusetyenziswa kwemifanekiso ye-SIASGE (i-Italo-IArhente yeArhente yoLawulo lweNgxakeko), ukuze isetyenziswe kwimeko yomnyhadala. (Iisatellite ezintathu kumda we-6)
Iinkampani zeMendoza zezobuchwephesha kunye neenkonzo, zihlelwe kwiZiko loShishino, iThekhinoloji kunye noPhuhliso lweeNkonzo (IDITS), elityikitye isivumelwano kunye ne-ICES, ukuze icandelo lezemveliso liyinxalenye yesi siCwangciso, sele sikhona nokuba kukucutha ubungozi babo ngaphambi kwemeko kaxakeka, ukuncediswa okanye ukusebenzisana kwiimeko zikaxakeka.
Izifundo ze-cortical deformation kunye neteknoloji yemifanekiso yesatellite kunye neziseko ze-GPS.
Isivumelwano kunye neCandelo loPhuculo loLuntu kunye neCandelo loLawulo lweeNtsebenziswano. EMendoza, amaziko asebenzisanayo asasaza amanzi; umbane nokutya. Ezi nkonzo zichaphazeleka kakubi emva komsitho kwaye zivelise amaxhoba amaninzi kunomsitho ngokwawo.
Iphondo kufuneka libe nezi zinto kwiimeko zentlekele.
Zonke ezi zixhobo kufuneka zichazwe kwimephu kwaye ziguqulelwe kwinkqubo enye.
I-GEMAS isebenzisa isoftware yolwazi nge-geographic information system (GIS) ene-gvSIG njengesiseko se-cartographic.
Umbutho we-gvSIG uyisasaze ngempumelelo inkqubo yayo, esetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela namhlanje, kwaye uluntu olusebenzisayo lunegalelo kwinkqubo yophuhliso olwahlukeneyo olwenze ukuba ukusetyenziswa kwe-gvSIG kukhule kwaye kuphuculwe.
I-UNCUYO kunye ne-ICES bazibophelele ekusebenziseni ezi nkqubo zokusetyenziswa simahla njengenxalenye yomsebenzi wabo wemfundo kwaye bakhethe i-gvSIG, zombini ngenxa yokubanakho kunye nemiba yolwimi nenkcubeko.
Ukudibana kwamazwe kumazwe kwabo babehlelwe yintlekele kunokuba luncedo ngakumbi ukuba ngaba uLawulo lweDISKILE KULULA KUNYE NOKUQHUTYELWA KWEEMPAHLA.
Sikholelwa ukuba i-gvSIG inokuba yinkqubo yokusetyenziswa ngokubanzi kwemvisiswano yokusetyenziswa kwayo kunye nezinye iitekhnoloji.
Ukuza kuthi ga ngoku, i-UNCUYO kunye ne-ICES zenza ukuba zifumaneke kuMbutho we-gvSIG imigaqo-nkqubo yokusebenza elungiselelwe ukuza kuthi ga ngoku kwisicwangciso se-GEMAS.
Ngokunjalo, omabini amaziko acela uluntu lwe-gvSIG ukuba lunike uluvo lwalo malunga neprojekthi, imigaqo-nkqubo kunye nemeko ukuba bayayifumana inomdla wokuba singadibana kulawulo LWEZAKHONO ZOKUGQIBELA ukuze kuveliswe izixhobo eziqhelekileyo ezenza ukuba imisebenzi isebenze ngakumbi kwaye ekugqibeleni KUTHENI YIBA SONKE SENZA EMHLABENI ISITOLO ESIPHELEKILEYO SOKUPHILA.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Abaphumeleleyo be-7 Natural Wonders
Post Next IGeobide, unxibelelwano nedatha ye-OGCOkulandelayo »